Rosia: Voasakana ilay tranonkala malaza noho ny fitarainan’ny mpiasa · Global Voices teny Malagasy
Taona 2020 fotsiny, nahazo jeripejy miisa 4,5 tapitrisa an-tserasera ny Antijob
Voadika ny 22 Septambra 2021 4:08 GMT
Miasa ao Rosia efa ho 20 taona ny Antijob, tantanan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona baranahiny libertariana. Sary natolotry ny Antijob.
Ity lahatsoratra nosoratan'i Thomas Rowley ity dia nivoaka tao amin'ny Open Democracy tamin'ny 13 Septambra 2021. Navoaka eto indray izany ho ampahany amin'ny fiaraha-miasa fifampizarana votoaty ary nasiam-panovana mba hifanaraka amin'ny endrin-dahatsoratra GV.
Nosakanan'ny manampahefana Rosiana ny tranonkala malaza iray noho ny fitarainan'ny mpiasa taorian'ny nandresen'ny orinasa mpivarotra tany sy trano ao Moskoa tamin'ny raharaham-pitsarana iray, io no fanakanana ny aterineto farany nataon'ny mpandrindra ny fifandraisana ao amin'ny firenena.
Efa niasa nandritra ny 17 taona ny Antijob, ilay tranonkala resahina, ary mandray fitarainana tsy fantatra anarana an'arivony momba ny Rosiana mpampiasa (olona). Ny fitarainana nalefa tao amin'ny tranonkala dia misy hatramin'ny (fiasana) ora maro sy ny fomba fitantanana mamitaka ka hatramin'ny fanararaotana ny mpiasa sy ny fahataran'ny karama.
Nanakana ny Antijob tamin'ny 11 Septambra ny Roskomnadzor, mpandrindra ny fifandraisana Rosiana, taorian'ny nandresen'ilay mpanera trano sy tany amin'ny aterineto, PIK Broker, ny raharaha fanalam-baraka natao tamin'ny tranonkala miisa fito, anisan'izany ny Antijob, izay mandray fitarainana voalaza fa nosoratan'ireo mpiasa teo aloha. Araka ny lalàna momba ny fanalam-baraka Rosiana, azo sakanana noho ny votoaty manala baraka ny tranonkala, anisan'izany ny pejin-tranonkala an'olona tsotra.
Nametraka fanamarihana izay nahitana fitarainana momba ny fihetsika tsy “matihanina” ataon'ny fitantanana sy ny fandroahana mpiasa faobe ireo voalaza fa mpiasa teo aloha tao amin'ilay orinasa rantsan'ny mpandraharaha ara-barotra tany sy trano malaza ao Moskoa, PIK.
Nilaza tamin'ny fanambarana ara-pitsarana nataony ny PIK Broker fa fanalam-baraka ny raharahan'ny orinasa ity fampahalalana ity. Tamin'ny fanapahan-keviny tamin'ny 4 Mey 2021, nahita ny Fitsarana Mpanelanelana ao Moskoa fa “diso”, “nanala baraka ny lazan'ny [orinasa]” ilay voalaza fa fanamarihana ka norarana tsy hiparitaka tao amin'ny Federasiona Rosiana.
Nilaza ny PIK Broker tamin'ny fanehoankevitra iray ho an'ny OpenDemocracy fa “nandray ny fepetra azo natao rehetra izy ireo handaminana izany fifanolanana izany ivelan'ny fitsarana”, saingy “noterena” hiaro ny lazany tany amin'ny fitsarana.
“Tsy mandrara ny olona tsy hilaza ny heviny momba ny asa amin'ny fikambanana rehetra ny lalàna Rosiana,” hoy ilay orinasa, “fa tokony harovana ny zony sy ny tombontsoany ara-dalàna raha diso sy manimba ny lazan'ny orinasa izany fampahalalana izany.”
Nanambara ny Antijob raha niresaka tamin'ny OpenDemocracy fa miatrika fitarainana ara-pitsarana avy amin'ireo orinasa voatonona ao amin'ny tranonkala “matetika” izy ireo, fa saingy “ny fangatahana mivantana nataon'ny Roskomnadzor ihany no nanehoany hevitra”.
“Voasakana izahay indray mandeha na indroa isan-taona,” hoy ny Antijob. “Fa nandefa dindon-tranonkala [dika mitovy amin'ny tranonkala amin'ny adiresy hafa] izahay” tamin'ity indray mitoraka ity.
“Tratran'ny fanafihana DDoS ihany koa izahay, ny fikorisana miadana mba tsy hahitana anay amin'ny milina fikarohana, ary mahazo fandrahonana mivantana ihany koa izahay amin'ny fahitana anay amin'ny alàlan'ny adiresy IP ary amin'ny ‘fanjavonana’.”
Nahazo jeripejy anjotra miisa 4,5 tapitrisa ny Antijob tamin'ny taona 2020 ary namoaka fitarainana vaovao miisa 11.000 momba ny mpampiasa Rosiana. Ny mpikambana ao amin'ny vondrona mpikatroka Rosiana baranahiny-libertariana, Autonomous Action, no nanomboka voalohany ny tetikasa ary mikendry ny “hanome feo ireo izay matetika tsy afaka manao izany.”
“Efa hatrany am-boalohany izahay no miaraka amin'ireo mpiasa amin'ny adin'izy ireo amin'ny mpampiasa.”
“Mahalana no misy olona mandre ny hevitry ny mpiasa ankehitriny na mety ho mpiasa ao amin'ny orinasa iray – ary raha sendra tranga tena ratsy no niseho vao re izany”, hoy ny tetikasa tamin'ny OpenDemocracy. “Matetika ny mpampiasa no manana mpisolovava miasa ho azy ireo, loharanom-pahalalana betsaka, lahatsoratra nandoavam-bola ao amin'ny fampitam-baovao sy ny dokambarotra. Izany no antony anangonanay ireo fanamarihana ireo […] mba hahafahan'ny olona mieritreritra ny hiasa amin'ilay orinasa mahita ny tena zava-misy marina ao anaty orinasa.”
Na dia nilaza aza ny Antijob fa “tsy afaka manome antoka ny fahamarinan'ny fanamarihana rehetra izy ireo” dia manamarika kosa ilay tetikasa fa mitrandraka ny rafitra fanamarinana ny mombamomba ny mpisera izy ireo, ary ny safidy amin'ny fampidirana porofo momba ny fitakian'ny mpiasa. “Efa hatrany am-boalohany izahay no miaraka amin'ireo mpiasa amin'ny adin'izy ireo amin'ny mpampiasa,” hoy ny tetikasa.
Nilaza ny tranonkala fa tsy mandray anjara amin'ny raharaha ara-pitsarana izy ireo noho ny antony ara-bola sy ara-piarovana: tsy avoaka ny mombamomba ireo mpikambana ao amin'ny tetikasa, ary nilaza ny ekipa fa “zava-dehibe kokoa ny fandaniana ireo loharanom-bolany amin'ny fampivelarana ny tranonkala.”
Nesorina tao amin'ny tranonkalan'ny Antijob ny fanamarihana voalaza momba ny PIK Broker nanomboka tamin'izay, saingy, hoy ny tetikasa, haverina amin'ny tranonkala raha toa ka misafidy ny handefa azy ireo amin'ny fanitsiana indray ny mpisera.
Nanjary fomba fanao mahazatra any Rosia tato anatin'ny folo taona lasa ny fanakanana ireo tranonkala politika sy ny fampitam-baovao. Mialoha ny fifidianana solombavambahoaka amin'ity volana ity, ohatra, dia nikasa ny hanakatona ny fidirana amin'ireo tranonkala tantanan'ny ekipan'ny mpanohitra malaza Alexey Navalny ny manampahefana Rosiana. Mitrandraka rafitra fifidianana misy paikady amin'ny aterineto izay manome soso-kevitra amin'ny fifidianana kandidà tokana mba handresena ny kandida iray mpiara-dia amin'ny fitondrana Potinina i Navalny.
Araka ny filazan'ny Antijob, tokony hivaha ao anatin'ny andro vitsivitsy ny tranokalan'ny tetikasa – rehefa avy nitatitra tamin'ny Roskomnadzor izy ireo fa namafa ny vaovao notoherin'ny PIK Broker.
“Serasera tena tsara izany ho an'ny orinasa,” hoy ny Antijob. “Latsaky ny 500 teo ny mpisera no nahalala izany raha tsy nitory izy ireo.”